Sababta Rasmiga Ah Ee Ay Man United U Hakisay Heshiiska Jadon Sancho Oo La Ogaaday & Ed Woodward Oo Qorshe Cusub La Yimid | Laacibnet.net
Sababta Rasmiga Ah Ee Ay Man United U Hakisay Heshiiska Jadon Sancho Oo La Ogaaday & Ed Woodward Oo Qorshe Cusub La Yimid
Manchester United ayaa hakad gelisay dadaalkii ay ugu jireen saxiixa Jadon Sancho, waxayna bedelkiisa muhiimad siinayaan saxiixa daafac dhexe cusub iyo gooldhaliye cusub sida ay sheegayaan warar soo baxaya.
Sancho ayaa ahaa bartilmaameedka koowaad ee Manchester United xagaagii la soo dhaafay laakiin Borussia Dortmund ayaa ku adkeysatay qiimihii ay duldhigtay oo ahaa 108 milyan ginni, taasoo keentay in xiddiga garabka ka dheela uu sii joogo Bundesliga.
Warar Jarmalka ka soo baxayay horaantii bishaan ayaa sheegayay in Dortmund ay haatan diyaar u tahay inay hoos u dhigto qiimaheeda Sancho iyagoo diyaar u ah inay aqbalaan 88 milyan ginni.
Laakiin sida ay sheegtay The Athletic, United ayaa hakad gelisay xiisaheeda Jadon Sancho iyagoo u weecday saxiixa labo xiddig kale oo ka hor marinayaan kan Sancho.
Warbixinta wargeyska ayaa lagu sheegay in United aysan si rasmi ah uga bixin tartanka 20 jirkaan laakiin ay doonayaan inay marka hore soo iibsadaan daafac dhexe iyo gooldhaliye.
Waxay sidoo kale sheegeen in horumarka uu sameeyay Greenwood inay ugu wacan tahay in United ay qaboojiso xiisaheeda Sancho.
United ayaa u muuqata mid raacday taladii uu dhawaan siiyay halyeeygooda Paul Scholes oo kula taliyay inay kooxda la soo wareegto daafac dhexe cusub iyo weeraryahan gooldhaliye ah ka hor inta aysan keensanin xiddig garabka midig ka dheela.